Oghere ụlọ ọrụ n'ime United States
1 - 1 nke 1 ndepụta
$480 / 80ft2 - Oghere ụlọ ọrụ maka mgbazinye - Oge mara mma 1888 Timber Baron...
Nwee ọmarịcha oge 1888 Timber Baron's Mansion dị ka oghere ọfịs gị na Denver! Suite 2G bụ maka mgbazinye! Ọkachamara obere ụlọ ọrụ, nke 80 sq. ft. maka mgbazinye na 1888 kpochapụwo brik na-acha uhie uhie Denver Mansion na ndịda ọdịda anyanwụ akuku City Park. Ike gwụla maka oghere ụlọ ọrụ na-adịb...
Maka mgbazinye | 80 sq feet
Denver in Colorado (United States), 80206
Ebiputara site na Ann Harrison
nlele Oghere ụlọ ọrụ Bipụtara 8 months ago
Ọfịs na-abụkarị ime ụlọ ma ọ bụ mpaghara ọzọ ebe a na-arụ ọrụ nhazi, mana ọ nwekwara ike igosipụta ọnọdụ dị n'etiti nzukọ nwere ọrụ dị iche iche dị na ya (lee onye isi, onye na-ahụ maka ọfịs, onye isi); nke ikpeazụ bụ ojiji mbụ, ọfịs dị ka ebe na-ezo aka na ọnọdụ nke ọrụ mmadụ. Mgbe ejiri ya dị ka ihe akpọchi, okwu ahụ bụ "ụlọ ọrụ" nwere ike na-ezo aka na ọrụ metụtara azụmahịa. N’edetu iwu, ụlọ ọrụ ma ọ bụ ọgbakọ nwere ọfịs n’ebe ọ bụla o nwere ọnụnọ gọọmentị, ọbụlagodi ma ọnụnọ ọnụnọ a bụ, dịka ọmụmaatụ, salo nchekwa kama ọfịs. Ọfịs bụ ihe owuwu na ihe owuwu; ma ọ bụ obere ọfịs dịka bench dị na akuku nke obere azụmaahịa nke obere obere (lee obere ụlọ ọrụ / ụlọ ụlọ), site na ala ụlọ niile, ruo ma gụnyere nnukwu ụlọ a raara nye kpamkpam na otu ụlọ ọrụ. N'ụbọchị ọgbara ọhụrụ, ọfịs na-abụkarị ebe a na-ewe ndị ọrụ na-acha ọcha. Dịka James Stephenson, "Ọfịs bụ akụkụ nke ụlọ ọrụ achụmnta ego nke nyefere ozi na nhazi nke ọrụ ya dị iche iche."